हामीलाई तपाईंको कथा भन्नुहोस् - कोभिड १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
तपाइँको कहानी साझा गर्नुहोस्
के तपाईंले COVID-19 खोप लिनुभएको छ?
के तपाईको परिवार वा साथीहरुले खोप लगाईएको छ?
के तपाईं COVID-19 खोप लिने बारे दु: खी हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने किन?
के तपाइँसँग खोप सम्बन्धी घटना छ जुन तपाइँ हामीसे फिचर गर्न चाहानुहुन्छ?
के तपाइँ हाम्रो 'समुदाय' विशेष पृष्ठहरूसँग सम्बन्धित जानकारी फिचर गर्न चाहनुहुन्छ?
यदि हो भने, हामी तपाईंबाट सुन्न चाहन्छौं। तपाईंको कहानी, घटना वा जानकारी साझा गर्नुहोस् ताकि हामी स्थानीय मुद्दाहरू बुझ्न सक्दछौं। तपाईं हामीलाई थाहा दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं यो प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ।